Myanmar: ကျောင်းသားသပိတ် အင်အားအလွန်အကျွန် အသုံးပြု အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲခြင်း တာဝန်ရှိသူများကို စုံစမ်းဖော်ထုတ် အရေးယူသွားပါ « Burma Democratic Concern (BDC)
Home » Burma Democratic Concern (BDC) » Myanmar: ကျောင်းသားသပိတ် အင်အားအလွန်အကျွန် အသုံးပြု အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲခြင်း တာဝန်ရှိသူများကို စုံစမ်းဖော်ထုတ် အရေးယူသွားပါ
Myanmar: ကျောင်းသားသပိတ် အင်အားအလွန်အကျွန် အသုံးပြု အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲခြင်း တာဝန်ရှိသူများကို စုံစမ်းဖော်ထုတ် အရေးယူသွားပါ
11 March 2015 ကျွန်ပ်တို့ Burma Democratic Concern (BDC) အနေဖြင့် မတ်လ (၁၀) ရက်နေ့ တွင် လက်ပံတန်းမြို့ရှိ ပင်မ ကျောင်းသားသပိတ် ရှိ ဆန္ဒပြကျောင်းသားများကို ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက နံပါတ်တုတ်များနှင့် ၀င်ရောက် အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲခြင်း နှင့် ကျောင်းသားသပိတ် ထောက်ခံဆန္ဒပြပွဲများအား ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ နှင့် အရပ်သား စွမ်းအားရှင် များ သုံးပြီး အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲခြင်း အပေါ် ပြင်းထန်စွာ ရှုတ် ချပါသည်။
အထူးသဖြင့် စိတ်ကြွရူးသွပ် ဆေး သုံးစွဲထား သည်ဟု သံသယရှိ ဖွယ်ရှိသော ရဲများက —
•	လူနာတင်ကားမှန်း သိပါလျှက် ကြက်ခြေနီဝတ်စုံ ဝတ်ဆင်ထားတာ တွေ့ပါလျှက် ရက်ရက်စက်စက်ရိုက်နှက် ခြင်း
•	ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးက မလွှဲမရှောင်သာ၍ အင်အားသုံးဖြိုခွင်းရသည်ဟု ပြောဆိုထား သော်လည်း ဗီဒီယိုဖိုင်တွင် ဖမ်းဆီးခြင်း ခံထားရပြီး ပြန်လည်ခုခံနိုင်စွမ်းမရှိသည့် ကျောင်းသားတစ်ဦးကို နှစ်ဆယ်ဦးထက် မနည်းသည့် ရဲများက နံပါတ်တုတ်များဖြင့် ဝိုင်းရိုက် ခြင်း ၊
•	ကျောင်းသားသပိတ်ဖြိုခွင်းဖို့ အတွက် အသက်မရှိတဲ့ကားကို သဲကြီးမဲကြီး အညှိူးတကြီး ပရမ်းပဒါဖျက်ဆီးပြစ် ခြင်း ၊
•	ဗီဒီယိုဖိုင်တွင်ဘုန်းကြီးခေါင်းကိုဝိုင်းရိုက်နောက်ကနေ ပြေးစောင့်ကန်နေကြ ခြင်း ၊
•	သတင်းထောက်များ ကို ကင်မရာကိုင်ခွင့်မပေး ဘဲ သတင်းထောက်များ ကိုပါ နောက်ကနေလိုက်ရိုက်ခြင်း ၊
•	တာဝန် ဆိုသောလက်ပတ် ပတ်ထားသော အရပ်သား စွမ်းအားရှင် တွေသုံးပြီး ဆန္ဒပြ ကျောင်းသားများကို အကြမ်းဖက် နိမ်နင်းခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။
ဤကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ များ၏ အကြမ်းဖက်မှု ၊ ရက်စက်ကြမ်း ကြုတ် မှု ၊ အင်အားအလွန်အကျွန် အသုံးပြုမှု များ က အီးယူ အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ များကို အကြမ်းမဖက်ရန် ၊ မရက်စက်မကြမ်း ကြုတ် ရန် ၊ အင်အားအလွန်အကျွန် အသုံးမပြုရန် ပိုမိုသင်ကြားပေးရန်လို အပ် ကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြနေပါသည် ။
ထို့အပြင် တာဝန်ယူမူ ၊ တာဝန်ခံမူ ၊ အမိန့်ပေးသူ ၊ အမိန့်ပေးခံရသူ ဆက်စပ်မူ အပြန်အလှန် ချိတ်စပ် မူကြောင့် အီးယူ အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ များအပြင် ဆက်စပ်တာဝန်ရှိသူများအားလုံး – ဥပမာ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး မှအစ တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် များအလယ် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမူးများအဆုံး အားလုံးကို ပြည်သူများ၏ရပိုင်ခွင့် ၊ လူ့အခွင့့််အရေး ၊ အကြမ်းမဖက်ရန် ၊ မရက်စက်မကြမ်း ကြုတ်ရန် ၊ အင်အားအလွန်အကျွန် အသုံးမပြုရန် သင်တန်းများ ပိုမို သင်ကြားပေးရန်လိုအပ်ကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြနေပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၌ ရဲ များမတရားလုပ်မူ တိုင်ကြားရေး လွတ်လပ်သော အမြဲတန်း ကော်မရှင် တခုကို ပြည်သူများ ယုံကြည်ကိုးစားသော ပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထား ရန်လိုအပ်ပြီး ဤကဲ့သို့ ရဲများ၏ အကြမ်းဖက်မူများကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်အရေးယူသွားရန် အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြနေပါသည်။
ထို့ အပြင် ဖိနှိပ်သော ဥပဒေများ ဖျက်သိမ်းရေး နှင့် ဒီမိုကရေစီကျင့်ဝတ်ဥပဒေများ ဖြင့် အစားထိုးရေး လွတ်လပ်သော အမြဲတန်း ကော်မရှင် တခုကို ပြည်သူများ ယုံကြည်ကိုးစားသော ပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး မတရား ဥပဒေများကို အာဏာပိုင်များ လက်တလုံးခြား အသုံးမပြုနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်သွားရန် အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြနေပါသည် ။
ကျွန်ပ်တို့ အနေဖြင့် ဤကဲ့သို့ ရဲများ အာဏာပိုင်များ၏ ရက်စက်ကြမ်း ကြုတ် မှု ၊ အင်အားအလွန်အကျွန် အသုံးပြုမူ များကို ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက် ပြီး တာဝန်ရှိသူများကို စုံစမ်းဖော်ထုတ် အရေးယူသွား ရန် အလေးအနက်တောင်းဆိုလိုက်ပါသည် ။
BDC unequivocally denounces police brutalities
Burma Democratic Concern (BDC) unequivocally denounces police brutalities cracking down on students’ protest in Latpantann on 10 March 2015 and other protests around Burma by using excessive force, by conducting unethically and unprofessionally and by using thugs. Especially, the police appeared to have taken drugs when they are attacking student protesters.
We would like to highlightafew facts which raised our concerns such as:
•	by attacking ambulance car which clearly shown red-cross emblem as well as attacking red-cross personnel who are attending injured students
•	in one video file uploaded on facebook clearly showingastudent was arrested and escorted by riot police and then from opposite directionagroup of riot police (approximately 20) run charging at him with batons deliberately which is clearly showing aggression of the riot police and motive of the government!
•	in one video file uploaded on facebook clearly showingagroup of riot police deliberately and aggressively attacking on the vehicle which is used by student protesters
•	in one video file uploaded on facebook clearly showingagroup of riot police kicking Buddhist monk from the back and other several riot police repeatedly beating him with batons
•	attacking media journalists and even do not allow them to hold cameras and/or batons wielding riot police chase charging them clearly demonstrate government aggression towards media freedom
•	by using government-sponsored plain-clothed thugs wearing red hand-bands written in Burmese “Duty” to attack arresting student protestors.
By seeing above evidences of Burmese polices’ aggressions, brutalities, using excessive force, we believe, it is clearly highlighting that EU should train more on Burmese police force not to be aggressive toward public but to be professional one, not to commit brutalities but to exercise ultimate restraint, not to use excessive force but to use force as the least and the last resource.
Addition, according to interdependency and inter-connectivity of command chain of responsibility and accountability, we believe, it is clearly highlighting that EU should not only train Burmese police force but also EU should train from home minister, regional prime-ministers to township level general administration officers with respecting rights of civilians, human rights, not to be aggressive toward public but to be professional one, not to commit brutalities but to exercise ultimate restraint, not to use excessive force but to use force as the least and the last resource.
Furthermore, recent police brutalities clearly highlighting that Burma should establish permanent “The Independent Police Complaints Commission” comprises of with respectable personnel and professionals who will be handling public’s concerns and complains over police brutalities so as to prosecute whosoever committing crimes.
Moreover, recent government use of colonial era laws dated back as early as 1900s to crack down on students’ protests clearly showing that Burma should establish permanent “The Independent Law Reviewing Commission” so as to review, repeal and replace draconian laws which can be manipulated to use oppressing public with the democratic laws.
We earnestly call for Burmese government to bring anyone before justice whosoever responsible for using brutal police aggression and using excessive force toward student protestors.
The Professional Soldiers and Their Responsibilities
လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်မှစပြီး ကိုးကန့်တယုတ် ဘိန်းမှောင်ခို သူပုန် များနဲ့ မြန်မာစစ်တပ် တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာ ဖြစ် ပွါးနေသည်ဟုကြားသိရပြီး နှစ်ဖက်အကျအဆုံး များသည်ဟုသိရသည်။ မြန်မာအစိုးရက ၎င်း ကိုးကန့်တယုတ် ဘိန်းမှောင်ခို သူပုန် များကို အခြား လက်နက်ကိုင် သူပုန် များ က ကူညီနေ သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။ ကိုးကန့်တယုတ် ဘိန်းမှောင်ခို သူပုန် အဖွဲ့မှ အထွေထွေအတွင်းရေးမူး ထွန်းမြတ်လင်း (Htun Myat Lin) က ကေအိုင်အေ (KIA)၊ တအန်း (TNLA) နဲ့ ရခိုင် (Arakan) အဖွဲ့များက ၎င်း တို့ဘက်မှ ကူတိုက်ပေးနေသည်ဟု အေပီ သတင်းဌာနသို့ ပြောကြားသည်။ ကိုးကန့်တယုတ် ဖုန်းကြားရှင် က ၎င်းတို့သည် တယုတ်များဖြစ် ကြပြီး တကမ္ဘာလုံး ရှိ တယုတ် များက ၎င်းတို့ကို ငွေအား အပြင်အစစ အရာရာ ကူညီကြရန် တောင်းခံထားသည်။
ဒီနေရာမှာ တပ်မတော်ရဲ့ စစ်ရေးအမြင် ရှိမူကို ဆန်းစစ် လိုပါတယ်။ ဖုန်းကြားရှင်ဟာ ချိုင်းနား တယုတ် ပြည်မှာနေထိုင်ပြီး ချိုင်းနား တယုတ် မီဒီယာမှာ ကိုးကန့်ကိုပြန်လာတိုက်မယ် လို့ ကြိမ်းဝါးနေတာ မနှစ်က နှစ်တွေ ကတည်းကပါ ။ ဒါကြောင့် ဖုန်းကြားရှင် တပ်တွေ ကိုးကန့် ကိုဝင်တိုက်မယ်ဆိုတာ လှျိုဝှက်ချက် မဟုက်သလို ရှောင်တခင်ဝင်တိုက်တာမဟုက်ပါ။ မြန်မာစစ်တပ်ဘာပြင်ဆင်ထားခဲပါလဲ???
၂၀၀၉ မှာ ဖုန်းကြားရှင်ကိုဝင်တိုက်တုန်းက ကွပ်ကဲခဲ့တာ အခုကာချုပ်ဖြစ်နေတဲ့ ဗိုလ်ချုပ် မင်းအောင်လှိုင်ပါ။ အဲ့ဒီတုန်းက ဖုန်းကြားရှင် ဟာသူ့သားရယ် သူ့ဘော်ဒီဂတ် ၂ ယောက် ရယ်နဲ့ ခွေးပြေး ဝက်ပြေး ခဲ့ရပါတယ်လို့သူကိုယ်တိုင် တယုတ် မီဒီယာမှာ ပြောနေတာပါ။ ဒါ့အပြင် ဖုန်းကြားရှင် ကသူ့ရဲ့ စစ်ရေး နည်းဗျူဟာ ကိုလဲ တယုတ် မီဒီယာမှာ ပြောနေတာပါ။ သူ့ကိုးကန့်တယုတ်အဖွဲ့ဟာ အခုစိုရင် အင်အား ၂၀၀၀ ရှိပြီဆိုတာရယ်၊ သူ့ချာတိတ်တွေဟာ အသက် ၂၀ စွန်းစွန်းသာရှိပြီး စစ်ပွဲအတွေ့အကြုံ မရှိဘူးဆိုတာရယ်၊ ကိုးကန့်တယုတ်အဖွဲ့ဟာ ပြောက်ကြားနည်းနဲ့ တိုက်မယ် ရင်ဆိုင် တည်စစ် မတိုက်ဘဲ ထောင်ချောက်ထဲရန်သူကို မြူသွင်းပြီး သတ်ကွင်းထဲရောက်မှ အပီစော်မယ်ဆိုတာတွေဟာ ဖုန်းကြားရှင် မီဒီယာမှာ ဗြောင် ပြောနေတာပါ။ ဖုန်းကြားရှင် နဲ့ တိုက်ဖို့ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားသင့်သလို ချိုင်းနား တယုတ်ကိုလဲ ဖုန်းကြားရှင်ကိုမကူညီဘို့ နောက်ကွယ်ကနေ ပြောထားသင့်ပါတယ်။
အခုမှ ဖုန်းကြားရှင် က ဝင်စော်ပြီး ကိုယ့်ဘက်က ခံရမှ ပြည်ပကျူးကျော် စစ်လို့ပြောရင် ကိုးကန့်ဟာ နိုင်ငံခြားသားလားလို မေးခြင်ပါတယ်။ စစ်မဖြစ်စေချင်ပါ။ ကျဆုံးသွားတဲ့ ရဲဘော်လေးတွေကို သနားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့လေးတွေ မသေသင့်ဘဲသေရတာဟာ ကြိုတင်မပြင်ဆင်ခဲ့လို့၊ ရန်သူကိုအထင်သေးလို့၊ ခေါင်းဆောင်မှူညံ့ဖျင်း လို့ ဆိုရင်တော့ အလွန်ရင်နာ စရာကောင်းပါတယ် ။ [18/02/15]
တကယ့်ပြည်ပ ကျူးကျော်စစ်ဆိုရင် သေနတ်ပေး …။ ငါကိုယ်တိုင် ဝင်တိုက်မယ် …။
ပြည်ပကျူးကျော်မှု …။ ဘယ်နိုင်ငံလဲ အတိအကျ ပြော …။
ရန်သူနာမည် တောင်ထုတ်မပြောရဲ အောင် ကြောက် နေပြီး ပြည်သူတွေကို “တောလေး တောင်လေး ဂျိုးပြော မိုးပြော” ရှောက် မပြောနဲ့ …။
နား နဲ့ မျက်စိ “ပိုလူးရှင်း” [Pollution] ဖြစ်တယ် …။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကို စစ်သားတွေ အတုယူကြစမ်းပါ ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဟာ နိုင်ငံရေး လုပ်တော့ တပ် ကထွက် ပြီး အရပ်သား အဖြစ် နိုင်ငံရေး လုပ်တယ်။ စစ်ယူနီဖောင်းကြီးဝတ်ပြီး ကိုယ့်ကို ပြည်သူက ရွေးကောက် မတင်မြောက်ဘဲ ပါလီမန်ထဲမှာ အရှက်မရှိ ဝင်မထိုင်ဘူး ။
ခေတ်ကြီးကိုက လူပျက်က နိုင်ငံရေးသမား လုပ်တဲ့ခေတ် ၊ မင်းသားက လူပျက် လုပ်တဲ့ခေတ်၊ စစ်ဗိုလ်က ပါလီမန် ထဲ အတင်းရော အဓမ္မရော ဝင်ထိုင် တဲ့ခေတ်။ ဪ ခေတ်ပြက်ကြီးဆိုတာ ဒီနေခေတ်တွေကိုပြောတာလား???
Job of the professional soldiers is to protect and to defend the nation. Soldiers shouldn’t be sitting in the parliament making laws. It is not their job. Now in real life, Burmese military is not really efficient to be called professional one since I have seen news about battles fighting between so-called Kokang rebel group and Burmese army and the outcomes of the battles are not really impressive. Addition, I have seen loads of military lobbies crying likeababy on line how soldiers fought, died and injured so as to seek sympathy vote for them and I think they are goingalittle bit too far now. Well, if you are scared of dying then don’t join the army and no one force you to join the army in the first place.
Furthermore, you guys don’t let us know when you are stealing or robbing state budget or taking bribes or abusing your position to exploit business opportunities or to terrorize civilians by using guns. And some soldiers or military lobbies are going extra miles by uploading video messages threatening opposition groups. Generally, people don’t hate soldiers but if army lobbyists push too much, then it will be counter-productive. I would say shut your mouth up and don’t too much dramatize the battles between Kokang and Burma army. Soldiers – it is your job to do properly and professionally after all.
Myanmar Land Confiscation
ကျနော်ဖေဖေ နဲ့ မေမေ ဟာ စိုက်ပျိုးရေး ဝါသနာပါ ပါတယ်။ ၁၉၈၈ အရေးအခင်း မ တိုင်ခင်က ရှိစု မဲ့စု စု ဆောင်းငွေလေးနဲ့ လှည်းကူး ရဲမွန် မှာ အစိုးရစီက တရားဝင် မြေရိုင်း တောရိုင်း (၁၀) ဧက လောက် ကိုဝယ်ပြီး ရှင်းလင်း ခုက်ထွင်ရှင်းလင်းပြီး ဥယျာဉ်ခြံမြေလေးကို ဂျင်း၊ ဆနွင်း၊ သပြေ၊ သရက် လေးစိုက်တယ်။
၁၉၈၈ အရေးအခင်း လဲပြီးရော တပ်မ (၁၁) ဖွဲ့တော့ စစ်တပ်က သိမ်းလိုက်တယ်။ အခုအချိန်အထိ လျော်ကြေးတပြားမှ မရသလို မြေနေရာ အစားလဲ ပြန်မရဘူး။
အဲ့ဒီအချိန်က တာဝန်ရှိသူက ဗိုလ်မှူးကြီး ခင်မောင်သန်း (နောင်ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်မောင်သန်း- အငြိမ်းစား) ဖြစ်ပါတယ်။
တပ်မတော် ရဲ့စေသနာ ဆိုတာ အဲ့ လို သူများ မြေကို လက်နက်အားကိုး အုပ်စုဖွဲ မိုက်ကြေးခွဲ အတင်းအဓ္ဓမ လုယူတာကို ခေါ်တာလား။ (Myo Thein)
အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခလစာသတ်မှတ်နိုင် တာဟာတိုင်းပြည်တခုအတွက်တိုးတက်ခြင်းပြယုဂ် (Minimum Wage)
Tags: Burma, Burma Democratic Concern (BDC), Myanmar
By Burma Democratic Concern (BDC) in Burma Democratic Concern (BDC) on 12/03/2015 .
← အမျိုးသားရေးတိုက်စစ်မှူးများ ကြေညာချက်	ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အစိုးရနှင့် ကျောင်းသားများ နှစ်ဖက်စလုံးအား မေးခွန်းထုတ် →